5 Ruux iyo gaarigii loo adeegsadey Madaafiicdii lagu garaacay Muqdisho oo la qabtey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
5 Ruux iyo gaarigii loo adeegsadey Madaafiicdii lagu garaacay Muqdisho oo la qabtey
MAREEG 8 April 2016 8 April 2016
Muqdisho —Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan kadib waxaa gacanta ay ku soo dhigeen 4 Ruux oo lala xiriirinayo madaafiic lagu garaacay Degmooyinka Xamar-jajab iyo Waabari ee Magaalada Muqdisho.
Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir, Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay 4-taasi qof laga qabtay iyagoo Gaari wata Wadada Maka Al-Mukarama ee Muqdisho.
Taliye Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) ayaa tilmaamay in labo ka mid ah Dadkaasi la qabtay iyagoo dhaawacan, waxuuna qeexay in loo qaaday Isbitaal, si halkaasi xaaladooda caafimaad loogu dabiibo.
Madaafiicdii Xalay ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 Ruux, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 10 kale.
Dhinaca kale, War ka soo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in Duqeyntaasi lagu beegsaday Xarunta Madaxtooyadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Maalmo ka hor ayee aheyd markii madaafiic khasaaro kala duwan ka dhashay lagu gaaray Nawaaxiga Madaxtooyadda Dalka Soomaaliya.
Jeremy Corbyn at Islington Somali Banadir Association: ‘Diversity is our strength